Warbixin: Xidigii diirada u saarnaa kooxda Manchester United Fabinho oo ku dhaw inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Xidigii diirada u saarnaa kooxda Manchester United Fabinho oo ku dhaw inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa.
Warbixin: Xidigii diirada u saarnaa kooxda Manchester United Fabinho oo ku dhaw inuu baaqi kusii ahaado kooxdiisa.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 29-08-16 2:46 PM Daafaca kooxda AS Monaco Fabinho ayaa lasoo tabinayaa inuu doorbidayo inuu iska sii jooga kooxdiisa halka uu ku biiri lahaa kooxda sida ba’an loola xiriirinayey ee Manchester United.
horaantii bishan kooxda ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ee Manchester ayaa dalab 30 Milyan oo ginni ka gudbisay daafacan ka ciyaara dambeedka midig.
Si kastaba ha ahaatee, Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa ka dhawaajiyey inuu gali doono dagaalka qabow waxa uu ugu yeeray inta ka harsan suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada maadaama uu horey ula soo saxiixday ciyaaryahanada kala ah Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan iyo Paul Pogba.
Ilo ku dhaw dhaw kooxda AS Monaco ayaa u sheegay wargeyska Sky Sports in kooxda ay daneyneyso iney sii heysato ciyaaryahankan maadaama kooxdan loolan xoogan ay la gali doonto kooxda PSG oo inta badan iska heysata horyaalka dalkaasi France.
Dhanka kale Fabinho oo la hadlayey wargeyska ugu carabka dheer dalka France ee L’Equipe ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo wararka la xiriirinayo inuu ka dhaqaaqayo kooxdii tagtay finalka Eufa Champions League sanadkii 2004 ta.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in ciyaaryahankan uu si joogta ah ugu biiray kooxda reer France ee AS Monaco xagaagii tagay kadib markii uu labo sanno oo amaah ah uu horey ugu qaatay kooxdan.